Saina atao zesita fotsiny
Ny Belefona dia vantan-dehilahy avy amin’ireo tanàna madinika ao amin’ny faritry Fisakana ihany. Toa izao no fomba nanangonan’i Pelimaitso sy Rabenja Armand ny Belefona :
Nilazany ny tanàna madinika rehetra mba handefa miaramila ho azy isaka ny 20 andro. Miaraka aminy mandritra ny 20 andro izany miaramila izany dia misolo hafa indray. Mipetraka amina toby ireo miaramila ireo. Aminn’ny toby any an’ala toy ny tao Vohimena dia trano vita amin’ny ratsan-kazo no nitoerany ary nantsoiny hoe tranomaintso. Misy mpiambina ny toby, ka izay nandositra dia noheverina ho mpamadika ka novonoina tamin’ny fomba mampihoron-koditra tokoa.
Maro ny tovolahy no nirotsaka nanatevin-daharana ny Belefona. Antony telo no heverina ho nahatonga izany :
Voalohany dia leo ny asa fanompoana sy fandoavan-ketra ny olona. Faharoa dia noho izy ireo tsy nanan-tsafidy ihany koa satria ireo izay nandà ny hiaraka amin’ny Belefona dia nampitondrain’i Pelimaitso faisana tokoa. Farany dia teo koa ny fahatokisana ny herin’ny ody sy ny fahaizan’i Lahimorona mpimasy be niaraka tamin’i Pelimaitso.Nalaza ho nahay ody basy sy maso be tsy mahita mantsy ity Lahimorona ity. Ary ny Belefona tsirairay dia nampitetehany ireo ody ireo avokoa, ary nampisotroany tambavy somorona mialoha ny fanafihana natao.
Avy amin’iny atsimondrano iny ny ankamaroan’ny Belefona, dia Mahazoarivo, Fiadanana, Sandrandahy ary misy vitsivitsy avy any Miarinavaratra sy Imito. Haka ny poste administratif tao Fandriana no tanjon’ny Belefona. Ary ny hanafika tsikelikely izay toerana misy vazaha manomboka any Kianjanomby, tanindrazan’i Pelimaitso hatrany Fandriana no fikasàny. Ankoatra ny fanafihana mitam-piadiana dia isan’ny paika nampiasain’ny Belefona koa ny famotehana sy fandorana izay rehetra heveriny ho an’ny vazaha, toa ny sekoly sy ny fiangonana.
Ny alatsinainy 1 aprily 1947 no andro voatondro hanombohan’ny Belefona ny fanafihany. Ny concession n’ny vazaha tao Ambohimitombo no notafihin’izy ireo tamin’izany, ary resiny. Telo andro taorian’io, izany hoe ny 4 aprily 1947, dia ny concession des Frères tao Sainte Anne indray no notafihiny. Ny ampitson’io vao vita ny ady, ary resiny koa ireo vazaha tao.Tafaran’io fandresena tao Sainte Anne io dia nanohy ny diany nianavaratra ny Belefona ka nifanehatra tamin’ny miaramila vazaha tao Mahazoarivo indray, tokony ho tamin’ny fiandohan’ny volana jona 1947.
Tsy naharesy tosika ny Belefona ny garde indigène tao Mahazoarivo, ka nandositra sy nila vonjy teny Fandriana. Tafiditra tao an-tananan’i Mahazoarivo, araka izany ny Belefona. Tonga nanafika azy tao indray anefa ny miaramila vazaha avy eny Fandriana, ary dia raikitra ny fifandonana tao Mahazoarivo. Efa voatosiky ny vazaha hatrany Vinany, izay tokony ho lalana adiny iray avy ao Mahazoarivo ny Belefona, fa nanohitra ny vazaha hatrany.
Tany amin’io toerana io, dia naratra ny lehiben’ny miaramila vazaha ka voatery nentina hotsaboina teny Fandriana. Tafaverina nifehy an’iI Mahazoarivo araka izany ny Belefona.
Nanakoako tamin’iny atsimondrano iny io ady nifanaovana tamin’ny vazaha sy fandresen’ny Belefona io ary nanamora ny fanangonan’i Pelimaitso miaramila izany. Efa nahatratra 500 any ho any hono ny Belefona taorian’io ady tao Mahazoarivo io.